फोन तथा मोबाइलमा सेवाग्राहीलाई हैरानी, हाकिमलाई हाईसन्चो ! - Hamrokhotang
Home » News » फोन तथा मोबाइलमा सेवाग्राहीलाई हैरानी, हाकिमलाई हाईसन्चो !
फोन तथा मोबाइलमा सेवाग्राहीलाई हैरानी, हाकिमलाई हाईसन्चो !
By: HamroKhotang.com on Sunday, September 10, 2017 /
खोटाङ भदौ–२५, खोटाङमा सबै प्रकारका फोनमा समस्या आउँदा सेवाग्राही हैरान भए पनि सम्बद्द कार्यालयका प्रमुखलाई कुनै चासो छैन ।
फोन तथा मोबाईलमा कुरा गर्दा आवाज प्रष्ट नसुनिने, बोल्दा बोल्दै बीचमै काटिने, रातीको समयमा नेटवर्क नआउने लगायतका समस्या हुँदा सेवाग्राहीले करिब दुई महिनादेखि मार खेप्नु परे पनि टेलिकम शाखाका प्रमुख ज्योतीनारायाण चौधरीले कुनै चासो नदिएको बताईएको छ ।
सेवाग्राहीको समस्या र गुनासोलाई वास्तै नगर्ने चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन तथा निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । समस्या समाधान गर्न या कारण उल्लेख गरी बुझाउन भनी निर्देशन गरिए पनि अटेर गरेकाले समस्या उस्तै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेब अधिकारीको भनाई छ । आफुले पटक पटक फोन गर्दा समेत नउठाउने प्रमुखलाई पुनः लिखित जानकारी दिन निर्देशन गरिएको प्रजिअ अधिकारीले जनाउनुभयो ।
चौधरी कार्यलय प्रमुखको रुपमा सरुवा भएर आए लगत्तैदेखि शुरु भएको टेलिफोन तथा मोबाईल फोनको समस्या करिब दुई महिना बित्दा समेत उस्तै रहेको स्थानीय सेवाग्राही बताउँछन् । जिल्लामा यसअघि पनि फोन तथा मोबाईलमा समस्या आउँथ्यो तथापी तत्कालिन कार्यालय प्रमुख भरोसी शाह स्वयम मर्मतमा खट्ने गरेकाले तत्कालै समाधान हुने गर्दथ्यो ।
टेलिफोनसँगै जिल्लामा थ्रीजी तथा ईमेल ईन्टरनेट सेवा समेत प्रभाबित हुँदा जिल्लाको सञ्चारमा समस्या हुँदै आएको छ ।